Ikotishi likanokusho e-Aywaille elineSauna nebhavu lokugeza - I-Airbnb
Ikotishi likanokusho e-Aywaille elineSauna nebhavu lokugeza
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Anouk - BELVILLA
Indawo enokuthula e-Alwaille phakathi nokubukeka kwentaba kanye nethala elikhulu nengadi kubiza iholide elifanelekile e-Belgium. Kukhona ubhavu wangaphandle wokuphumula nokukhululeka ebumfihlweni kanye ne-sauna enobungozi.
Ehlelwe ngaphakathi kwesifunda esihle nesiluhlaza sase-Ardennes, leli khaya leholide liqinisekisa ukuthula nokuthula. Indawo yedolobha enezindawo zokudlela ingamakhilomitha angu-2. Yindawo enhle yokujabulela isimo somgwaqo, ukudla kwendawo, nokuthenga. Izitolo ezinkulu ziphumula ngamakhilomitha angu-3. I-Wild World Safari Park, i-Ninglinspo Valley, i-Grotte de Remouchamps ngezinye ze-Wallonia nemvelo, uzothola ivawusha enemininingwane yokunciphisa ivawusha lapha noma esikhungweni semininingwane yezivakashi.
Ukushisisa indlu yonke kuzogcina ingaphakathi ithokomele. Lungiselela ukudla okuthandayo ekhishini elivulekile. Ukuhlala lapha, unengadi enefenisha nethala lokujabulela ukuhlala ngaphandle. Amabhayisekili akhokhelwayo ayatholakala uma kucelwa ukuhlola indawo. Indlwana nesihlalo esiphakeme kuyatholakala. Umnikazi wendlu uhlala lapha.
Ukuhlelwa: Indawo yaphansi: (Indawo yokungena, ikhishi elivulekile (izitofu ezingu-4 zendilinga, i-ceramic), umshini wekhofi, uhhavini, i-microwave, umshini wokugeza izitsha, i-friji-freezer), indlu yangasese, igumbi lokugeza (umshini wokuwasha))
Ikamelo elakhelwe ngaphansi: (Igumbi lokuhlala (i-TV, i-accared sauna), Igumbi lokulala elinendlu yokugezela (umbhede olala abantu ababili, ishawa, i-wasbasin, indlu yangasese), Igumbi lokulala elinendlu yokugezela (umbhede olala abantu ababili, ishawa, i-wasbasin, indlu yangasese))
Ubhavu oyi-bubble (wangasese, ongafinyeleleka kuwo ngaphandle), ikhotheji, ukushisa (phakathi), ithala, ingadi (yangasese, 70 m2), ifenisha yengadi, amabhayisekili atholakalayo (akhokhelwe, ngesicelo, ugesi), isihlalo esiphakeme
4.56 · 34 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Anouk - BELVILLA